यो एंडोमेट्रियोसिससँग बस्न कस्तो छ: व्यक्तिगत निबन्ध - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
खेलहरु कम्पनी कल्याण समाचार कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर भारी खेल समुदाय कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> समुदाय >> यो एंडोमेट्रियोसिससँग बाँच्न कस्तो छ
दिउँसो दुई बजे, म ओछ्यानमा छु। मसँग तीन तताउने प्याडहरू प्लग इन छन्; एउटा मेरो पेटको लागि, एउटा मेरो तल्लो पछाडि र हिप्सको लागि, र अर्को मेरो पीठको लागि, जहाँ पीडा प्रायः बसिरहन्छ। मेरो शरीर शाब्दिक तातो मा लपेटिएको छ, र अझै पनि ... पीडा यो ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो बनाउँछ।
यद्यपि यो सधैं यस्तो हुँदैन। यी दिनहरू, दुखाइ प्रायः मेरो अवधिभरि केन्द्रित हुन्छ, दोस्रो दिन सामान्यतया सबैभन्दा खराबको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। जब म मेरो ख्याल राख्छु - जब म पर्याप्त निन्द्रा पाउँछु, क्याफिनबाट टाढा रहन्छु, र एक विरोधी भड़काउने आहारमा टाँसिन्छ - यो अधिक व्यवस्थित छ। पाँच प्रमुख पेट सर्जरी पछि, मेरो पीडा यो पहिले भन्दा धेरै कम छ।
मसँग चरण IV endometriosis छ। धेरै तरिकामा, पीडा केवल मेरो सामान्य छ।
एंडोमेट्रियोसिस भनेको के हो?
को अमेरिकन कलेज ऑफ ओब्स्टेट्रिशियनहरु र स्त्री रोग विशेषज्ञहरु (ACOG) ले एंडोमेट्रियोसिसलाई यस्तो अवस्थाको रूपमा वर्णन गर्दछ जहाँ गर्भाशयबाट टिश्यु गर्भाशय बाहिर फेला पर्दछ। एन्डोमेट्रियल टिशूको यी इम्प्लान्टहरू गर्भाशय अस्तरको प्रत्येक महिना जस्तो हुन्छ र बढ्छ। गर्भाशय बाहिरका टिश्युहरूमा मात्र कतै पुग्दैन — यसले तपाईंको शरीरबाट बाहिर निकाल्न सक्दैन जस्तै तपाईंको गर्भाशय अस्तरले गर्दछ। यसले दाग टिश्यू, सूजन, जलन र पीडा निम्त्याउँछ। मेरो केसमा, यसले एक भन्दा बढि पटक मेरो गर्भाशय मेरो पेटमा फ्यूज भएको छ।
र यो कुनै असामान्य होइन।
को एंडोमेट्रियोसिस हुन्छ?
यो अनुमान गरिएको छ कि उत्तर अमेरिकामा .5.5 लाख महिला र विश्वव्यापी १ 176 करोड महिलाहरूको एन्डोमेट्रियोसिस छ, भन्छन् अप्रिल समरफोर्ड , जो आफैंमा एन्डोमेट्रियोसिस छ र महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एंडोमेट्रियोसिस केन्द्रमा महिलाको स्वास्थ्य अधिवक्ता छ। यसले प्रजनन वर्षहरूमा १० मा १ जनालाई असर गर्दछ।
क्यारी लाम , एमडी, एक बोर्ड प्रमाणित परिवार चिकित्सा व्यवसायी, भन्छन् एन्डोमेट्रियोसिस एक प्रचलित प्रजनन स्वास्थ्य मुद्दाहरू मध्ये एक हो र बांझपनको प्रमुख कारण हो।
एन्डोमेट्रियोसिसका लक्षणहरू के के हुन्?
डा। लाम भन्छन् एंडोमेट्रियोसिसका लक्षणहरू समावेश गर्न सक्छन्:
अत्यधिक रक्तस्रावको साथ दर्दनाक अवधिहरू
लामो पेट र तल्लो पीठमा दुखाइ
ब्लीडिंग र चक्र बिचको स्पटिंग
पेशाब र आन्द्रा चालहरूमा दुखाइ बढ्यो
नर्भ दुखाई र जोड़ दुखाई
किनभने शल्यक्रिया आधिकारिक निदानको लागि आवश्यक छ, अनुसन्धान देखाउँदछ कि महिलाहरू पहिलो लक्षण देखि निदान सम्म सात वर्ष को औसत endometriosis साथ बस्छन्।
तपाइँ 24 घन्टा मा कती मोटरिन लिन सक्नुहुन्छ
समरफोर्ड भन्छ कि दुःखको कुरा, यो ढिलाइको सब भन्दा ठूलो कारण यो हो कि, डाक्टरहरूले अझै पनि पीरियड दर्दलाई 'सामान्य महिला समस्याहरू' को रूपमा खारेज गर्छन् र दुखाइको जड कारणहरू अनुसन्धान गर्न असफल हुन्छन्।
Endometriosis उपचार जुन मेरो लागि काम गर्‍यो
डा। एन्ड्रयू कुक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान डाक्टर हो जसले मलाई मेरो जीवन फिर्ता दिए। तीन शल्यक्रिया पछि, म अझै पनि पीडाको साथ व्यवहार गर्छु - तर यो कम कम हुन्छ। मैले उसलाई फेला पनु भन्दा अघि पीडा भनेको मैले दिनहुँ बाँच्न पाउनु थियो।
मेरो दाग टिशू धेरै व्यापक भएको थियो, र अतिरिक्त टिश्यू मेरो पेटको प्वालमा फैलिएको थियो। म सबै समय पीडित थिए। मैले लगभग एक अशक्त बिदा लिनुपर्‍यो किनभने ओछ्यानबाट उठ्नु र हरेक दिन काम गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण थियो।
मैले सबै एक पश्चिमी र पूर्वी उपचार उपलब्ध प्रयास गरे। मेरो OBGYN ले मलाई जन्म नियन्त्रणमा राख्यो, त्यसपछि एक औषधि भनिन्छ लुप्रन । उनले सिफारिस गरे कि म प्रजनन उपचारको लागि धेरै ढिलो हुनु अघि नै अनुसरण गरें, र त्यसपछिको वर्षमा, मैले भिट्रो फर्टिलाइजेसन (IVF) चक्र असफल भयो।
मेरो एक्यूपंक्चुरिस्टले क्युपि performed प्रदर्शन गर्यो र मेरो पलकमा सुई राखियो। उनले मलाई एक बिरामीलाई सिफारिश गर्छिन् जसका जादूका हातहरूले मेरो शरीरलाई पीडाबाट मुक्त गर्नका लागि प्रबन्ध गरेको थियो, कम्तिमा छोटो अन्तरालहरूमा। मैले प्राकृतिक चिकित्सा पनि भेट्टाए जसले पूरक र आहार परिवर्तन सिफारिश गर्‍यो। र एक बिन्दुमा, म विदेशबाट अर्डर गरिएको गिलहरी पपसँग मिसिएको चियाको कन्कोक्शन पिएकी थिएँ। किनभने यदि मेरो एक्यूपंक्चुरिस्टले मलाई दिएमा, म प्रयास गर्दै थिएँ।
मैले डा। कुकलाई भेट्टाएँ जुन त्यस देशमा थोरै डाक्टरहरू मध्ये एक थियो जुन त्यस समयमा एक्जेशन सर्जरी गरिरहेका थिए। उसले वर्णन गरेको शल्यक्रिया मैले अहिले सम्म अनुभव गरेको कुनै पनि कुरा भन्दा विस्तृत थियो, लक्ष्य मेरो गर्भाशय बाहिर बाहिरबाट प्रत्येक एन्डोमेट्रियल इम्प्लान्ट एक्साइज गर्ने लक्ष्यका साथ।
मेरो पहिलो शल्यक्रिया five घण्टा भन्दा बढि चल्यो। मेरो दोस्रो, एक बर्ष पछि, उस्तै थियो। यो तेस्रो तुरुन्तै लगियो, केहि दिन पछि, मेरो दाग टिशूको अन्तिम हटाउने उद्देश्यले।
यो शल्यक्रिया पछि आठ बर्ष भन्दा बढी भयो। र विगत दुईमा मात्र पीडा फेरि हुन थालिसकेको छ। बिस्तारै, कम्तिमा। कतै कहिँ पनि एक पटक जस्तो incapacitating यो थियो।
एन्डोमेट्रियोसिसको साथ बाँचिरहेका: कुनै उपचार छैन, तर राहत छ
निदानको साथ पनि, एन्डोमेट्रियोसिसको लागि कुनै साँचो उपचार छैन। यद्यपि एक्जेशन सर्जरीले पक्कै पनि मलाई सबैभन्दा लामो अवधिमा राहत दियो।
हुनसक्छ यो समय मेरो लागि अर्को सर्जरी भयो। तर म 40० को नजीक पुग्दा, मलाई थाहा छ कि मेरो अर्को शल्यक्रिया सम्भवतः हिस्टरेक्टॉमी हुनुपर्दछ। र म अहिलेको लागि तयार भएकी छैन। त्यसैले, म यी दिनहरूमा विभिन्न प्रकारका उपकरणहरूमार्फत मेरो दुखाइ प्रबन्ध गर्दछु: तताउने प्याडहरू, तातो स्नान, र सेलेब्रेक्स मद्दत म पनि हरेक दिन पाइकोजेनोल नामक प्राकृतिक पूरक लिन्छु, किनकि वास्तवमा यो एक पूरक हो अध्ययन गरिएको छ (सकारात्मक परिणामको साथ) endometriosis को लागी। को केटो आहार मेरो लागि सूजन कम गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी साबित भएको छ। र जब ती सबै दुखाइ अझै टुट्छ? म मेरो सबैभन्दा खराब दिनहरूमा मारिजुआना माइक्रोडोज गर्छु।
र यो काम गर्दछ। यसले मलाई सँगै कार्य र कडा राख्नको लागि सँगै काम गर्दछ, जसले गर्दा म काम गर्न जारी राख्न सक्दछु र एन्डोमेट्रियोसिसको साथ बाँचिरहँदा मेरो बच्चाको आमा बन्छु।
यो मेरो मूल निदान को लागी एक दशक भन्दा बढी भयो, र म सोच्न चाहान्छु कि आज मेरो शरीरलाई के चाहिन्छ भनेर मैले एउटा ह्यान्डल प्राप्त गरें। यो उत्तम विज्ञान होईन, तर मँ दिनदिनै पीडामा छु। यो कुनै एक चीज थिएन जसले मलाई त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्‍यो, जबकि एक सच्चे एंडोमेट्रियोसिस विशेषज्ञको साथ शल्य चिकित्साले मलाई निश्चित रूपमा अगाडि धकेल्यो। तर यो चिकित्सा स्याहार र प्राकृतिक उपचारको संयोजन हो जुन मलाई आज कार्यस्थलमा पुग्यो।
र यी सबैको लागि, म धन्यवादी छु।
प्रोबायोटिक्स १०१: तिनीहरू के हुन्? र कुनचाहिँ सब भन्दा राम्रो हो?
Adderall vs. Adderall XR: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
फ्लूaरbमा के फरक छ?
तपाइँ अस्थमा रोक्न के गर्न सक्नुहुन्छ
जन्म नियन्त्रण गोली चार्ट मा हार्मोन स्तर
प्रारम्भिक गर्भावस्था मा रक्तस्राव र रगत जम्ने
कति समय पछि योजना को लागी सेक्स